Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba » Izimbadada Amabhishi Nezindawo Zokungcebeleka Zokuthengiswa Kwe-Halloween
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • Culinary • Amasiko • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Imishado Yezothando Izinyanga Zekhefu • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Njengoba kuyisipho se-spooktacular sezivakashi zokuvakasha, Izimbadada Amabhishi nezindawo zokungcebeleka IHalloween Sale inikezela ngesidlo sakusihlwa samakhandlela sangasese sangasese samahhala sababili. Imibhangqwana izohlala etafuleni elihlotshiswe ngokukhethekile ngamalungiselelo wezimbali ezishisayo futhi likhanya ngamakhandlela.
Isidlo esinamakhosi amane sizonikezwa uweta ozofaka wena ibhodlela leRuffino Prosecco nokuthelwa okungenamkhawulo kwewayini likaRobert Mondavi Twin Oaks®.
Zonke izivakashi okudingeka zikwenze ukukhetha indawo yazo yokuzikhethela ukuze zidle kulesi sipiliyoni samahhala sedina.
Kutholakala eziqhingini zase-Antigua, eBahamas, eBarbados, eGrenada, eJamaica naseSanta Lucia, izivakashi zingabhuka, zibhalise futhi zingene ku:
Izimbadada Grande Antigua
Izimbadada Royal Bahamian
Izimbadada Emerald Bay
Izimbadada Royal Barbados
Izimbadada Regency La Toc
Izimbadada Halcyon Beach
Izimbadada Grande St. Lucian
Izimbadada Ochi Beach Resort
Izimbadada South Coast
Izimbadada Royal Caribbean
Izimbadada Montego Bay
Izimbadada Royal Plantation
Lesi sidlo sakusihlwa sesibani samakhandlela sangasese sababili siyatholakala lapho ubhukha ubusuku obukhokhelwayo obungu-6 noma ngaphezulu. Izihambeli kufanele zibhalise ukubhuka kwazo ukuze zithole lesi sipho esikhethekile sedinafomu ngefomu lokubhalisa elethwe kungakapheli amahora angu-72 wokubhuka.
Izivakashi esezibhukhiwe - azesabi! Bangasebenzisa ngokunenzuzo lokhu kunikezwa futhi ngokumane babhalise.
Kusukela ngesikhathi izivakashi zifika ezindaweni zokuphumula zezindiza, kuye kulo lonke ulwazi lokuvakasha, amaSandals afuna izivakashi zawo zizizwe ziphephile futhi zijabulele amaholide angakhathazeki. Ngaphandle kwalokhu okwenzekayo emhlabeni namuhla, izivakashi zingakhululeka ngokwazi ukuthi iSandals Platinum Protocol of Cleanliness iyasebenza kuzo zonke izindawo zabo zokungcebeleka.
Ngakho-ke ungesabi… bhukha ngamabhishi amaSandals kanye nezindawo zokungcebeleka futhi ubamukele bakwamukele epharadesi.